पत्र साहित्य : सञ्चारको विकासमा बस्तीको आवाज - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← पत्र कथा : सपना !!‏
गीत : म सानो →
पत्र साहित्य : सञ्चारको विकासमा बस्तीको आवाज
~बिष्णु सुवेदी ‘दोलखे’~
तिमीलाई थाहै छ । आजकोृ आधुनिक मान्छेले गरेको विकासका नयाँ नयाँ प्रयोगले दुनियाँ एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ । थुप्रै सुगमताहरुको प्रयोग गरेर हामी अगाडी बढिरहेका छौ । जमाना अनुसारका प्रविधिहरु विकास भइरहेका छन् । मान्छे नै त्यस्तो एउटा अजिव प्राणी रहेछ जसले चेतना र शिक्षाको बलमा नविनतम उपलब्धीहरु हात पार्न विविध जोखिम मोलेर नयाँ दृष्टि र नयाँ खोजको विस्तार गरिरहेछ ।
कुनै समय थियो विकासका नाममा सुन्य, विज्ञानका नाममा सुन्य त्यस समय प्रविधिहरु थिएनन् उपकरणहरु थिएनन् । त्यस वखतका मान्छेहरुको चेतना स्तर यति विधि माथिल्लो तहमा पुगेको थिएन । घण्टौ हिडेर एउटा बस्ती बाट अर्को बस्तीमा पुग्नुप¥र्थो । घुमन्ते जीवन यापन गरिरहेका पौठेजोरी खेलेर आफूलाई जोगाउँदै थुप्रै जोखिमहरु उठाएर आफूलाई अगाडी बढाउदै हिडथ्यो । ठूलो अन्तर थियो त्यस वखतको समय र आजको समय बिच ।
जंगली जनावरको जस्तो अनुहार बोकेर एकनास दौडिरहेको त्यो पुरातन मानव जातिले जीवन मापनका क्रममा आफूलाइ परिमार्जन र परिष्कृत तुलाउँदै लग्यो । समयका विभिन्न मोड र घुम्तीहरु पार गरेर ढुङ्गा युग, कृषि युग हुदै आजको युगमा मान्छे बेपर्वाह दौडिरहेछ । तिमी त लेखापढ । मान्छे मावन सभ्यता र विकासका चरणहरु बुझेर आएकी छौ । सकारात्मक संघर्षले जीवनका आयम बदल्दो रहेछ । आवश्यकता र चाहनाहरुले मान्छेलाई नयाँ खोजमा उन्मुख गराउँदो रहेछ । आफ्नो इतिहास लेख्न वा लेखाउन कम्मर कसेर मान्छे उठदोरहेछ यो सबै चेतना हुनुको करण हो लाग्छ मलार्य । भूगोलका दृष्टिले संसार ठूलो छ आदिम युगमा मान्छेहरु महिनौ लगाउथे नयाँ बस्ती पुग्न , भाषा फरक हुने हुँदा अनेकौ दुःखहरु भोग्न बाध्य हुन्थे उनीहरु , विस्तारै समय बदलिदै गयो, विकासका झिना मसिना उपलब्धिहरु हात पर्दै गए । आफूले गरेका उपलब्धिहरुका रहस्यमा टेकेर मान्छे खुवै हाँस्यो त्यस वखत । विस्तारै विस्तारै परम्भिक विकासका चरणहरु आधुनिक हुँदै गए । बन्दै गए । भद्दा, ठूला र जोखिम पूर्ण आकारहरु बदलिएर सानो, झिनो रुपमा विकास हुदै आए । अनेकौ रुपहरुको उपयोग गरिरहेका छौ यसको जगमा थुप्रै इतिहासका गाथाहरु पुरिएका छन् । यसपटक म तिमीलाई त्यो पुरातन सञ्चारकर्मी नारदको बारेमा र आदिम सुचनाको इतिहास बारे के हो बताउँदिन किनकी कतिपय कुराहरु तिमीले पनि खोज्नुपर्छ ।
मैले माथि विकासको पर्खाल छोएर एकै क्षण तिमीलाई पुरानो दुँनियातिर लैजाने मन गरे । त्यो दुनियाँको प्रगति उपलब्धिहरुका बारे पछि पछि पनि लेखौला तर आज उठाउन खोजेको सन्दर्भ भने आधुनिक सूचना र सञ्चारमा भएको क्रान्तिको विषयसँग सम्बन्धित छ । मानव जातिले गरेका थुप्रै अचम्म लाग्दा आधुनिक विकास सँगै सूचना र सञ्चारको विकास पनि एक । कुनै वखत रेडियोमा मान्छे बोलेको सुनेर भगवान ठान्ने जमाना आज रहेन । एक घर एक रेडियो यो अघोषित नारा कार्यान्वयन भइरहेछ अजा प्रविधिहरु डिजिटल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छन् । एक मिनेटमा विश्वका कुनै पनि स्थानको समाचार अर्को मिनेटमा प्रसारण भइसक्छ । वर्षाै लाग्ने समाचारको बाटो आकाशे मार्ग भएर एक मिनेटमा घर छिरिसक्छ । आजको मान्छेले गरेको थुप्रै वैज्ञानिक उपलब्धिहरु मध्ये रेडियो टिभी पनि एक प्रमुख उपलब्धि नै हो ।
जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ । म गाउँ जान्छु हरेक घरमा रेडियोका आवाजहरु गुञ्जिरहेका हुन्छन् बारीका पाटामा बोलिरहेको हुन्छ सुदुरस्थानबाट एउटा आवाज र सुनिरहेका हुन्छन बस्तीका उत्सुक मनहरु । सुचना र सञ्चारको क्षेत्रमा विशेष गरी २०४६ साल पछि क्रान्ति भएको छ । चासोमा वृद्धि भएको छ । समाचार, सुचनाहरु अनिवार्य शर्त बनेका छन् । झन पछिल्लो अवधिमा एफएमहरुको विस्तारले त उधम मच्चाइरहेछ । नयाँ प्रतिभा, आवाज र नयाँ जीवन शैलीका रंगहरु देखिन्छन, हलो जोतिरहेको एउटा किसान मोबाइलबाटै एफएम रेडियोमा आफ्नो गाउँको खवर र फर्माइस बोलिरहेको हुन्छ । एकै क्षणमा ग्रामिण समस्या, प्रगति विवरण घटना दुर्घटनाहरु, गीत संगितहहरु साहित्य कला आदि विविध बान्कीहरु कानकानमा ठोकिन जान्छ ।
हामी साह्रै भाग्यमानी समयका भाग्यमानी अनुहारहरु रहेछौ । मानव इतिहासको संघर्षपूर्ण कथाले स्थापना गरेका निकासका अनेकौ रुपहरुको उपयोगले हामीलाई फराकिलो पार्दै लगेको छ । एउटै लेखमा सबै कुराहरु उल्लेख गर्न सम्भव छैन हो यति मात्रै भन्नु आजलाई मान्छे सुचना र सञ्चार बिनाको अव बाँच्न सक्दैन । उसले बाँच्न प्रयोग गर्ने अक्सिजन जस्तै अनिवार्य तत्व बनेको छ । रेडियोको आवाज । एफ एमको आवाज । साथी जत्तिकै नजिकको भरपर्दो आवाज । तर पनि म देखि रहेको एफ एमको प्रभाव शहरमा टि.भीले खाइ दिएको छ तर गाउँ गाउँमा भने झन झन मजबुन्दै गएकोछ । यो सन्दर्भ पनि कुनै दिन टिपेर लेखौला । यो पत्रात्माक लेख तिमीले पढीरहदा । हामी चरिकोटमा कालिञ्चोक एफ एमको बार्षिक उत्सव मनाइ रहेका हुनेछौ । संञ्चारको वृद्धि हुनु भनेको मिडिया हाउसको मात्र हैन बस्तीहरुको, निमुखा, दुःखी र पिडितको, पछाडि पारिएको समुदायको सम्पुर्ण श्रोताहरुको आवाजको एक भरपर्दो साथी बन्नु हो ।
दोलखा जिल्लामा सुचना र सञ्चारको माध्यमले परिवर्तनको घोडा दौडाउन खोज्ने पहिलो एफ एमको वार्षिक उत्सवका वखत तिमी मार्फत अलिकता सुचनाको कुरा बोले हाम्रा आवाजहरुलाई, पीडाहरुलाई झन बाहिर ल्याउन सकोस । सबैको साझा आवाज बन्न सकोस । यस वखत कालिञ्चोक एफ एम लाइ यति भनौ । समयको कसीमा र जनताको मनमा खर्रो उर्तन सकोस कामना छ । दोलखालीहरुको ढुकढुकी बन्न सकोस् ।
विधा : पत्र साहित्य | Bishnu Subedi 'Dolakhe', Patra Sahitya. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।